Knitting & kpara uwe, Sublimation uwe elu, Hoodie - Onyinye
Onye ọ bụla rụrụ ya ọrụ, a ìgwè mmadụ na nri mix nke nkà na-akwado gị kwesịrị ekwesị ndụmọdụ, ị gaghị na-echegbu onwe banyere imewe, iji ndokwa na mmepụta, ọrụ.
2 Awa Ngwa ngwa Response
24 awa online, ngwa ngwa na 2 awa, mgbe nile ọsọsọ karịa ndị ọzọ, na-enye gị ọkachamara aro na ngwọta.
1 Kwụsị Ngwọta
Anyị nwere zuru ahụmahụ maka n'ichepụta na-arụ ọrụ, imewe / nlele / mmepụta / nnyefe dị nnọọ niile na ọrụ anyị, anyị ga-nyere gị iji hụ irè ị nweta usoro, Ọ na-azọpụta gị oge, mgbalị na nchegbu.
Jiangxi Onyinye Na Industrial Trade Co., Ltd., kemgbe n'ichepụta ihe akwa ngwaahịa maka afọ, ọkachamara na Knitting & kpara uwe, Sublimation uwe elu, Hoodie, naaa, akpa, Bandana wdg, uru maka onyinye, nkwado, ahịa, ọrụ , ememe, ihe wdg
Anyị kwụrụ ụgwọ n'afọ nke 1998, dị ka "Nanchang esịt Hongwei Knitting uwe Factory". Ugbu a ịgbasa dị ka nke na-akpa factory, na otu onye kpara wears factory "Nanchang Liqin uwe Co., Ltd." na otu ebi akwụkwọ factory "Nanchang Baisheng Printing Co., Ltd.", dị ka na-emepe emepe na-ezu mmepụta yinye. Nke ike GiftIn na-enye zuru ezu ngwọta n'ihi ahịa.
Jiangxi Onyinye Na Industrial Trade Co., Ltd.
Sublimation On Cotton T uwe elu , China T Shirt T-Shirt, T Shirts in Bulk Men, Sleeveless Running Shirt Men, Polo Design, Custom Dye Sublimation Shirts,
© Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara.